किन हुन्छ युरिक एसिड ? यसरी गर्नुहाेस् नियन्त्रण - ramechhapkhabar.com
युरिक एसिडको समस्या अहिले धेरै व्यक्तिकालागि टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । युरिक एसिडले गाँजेपछि टमाटर, कोल्डड्रिक्स, खसीको मासु लगायतका मन पर्ने खानपान त्याग्ने र कटौती गर्नुपर्दा कतिको दिनचर्या नै प्रभावित बनेको छ ।
जब मृगौलाको छान्ने क्षमता कम हुन्छ र युरिक एसिड रहन्छ, तब त्यो हड्डीको जोर्नीमा गएर जम्मा हुन्छ । मृगौलाले युरिक एसिड कम उत्सर्जन गर्दा पनि त्यो रगतमा जम्मा हुन पुग्छ । उपवास वा तिव्र रुपमा तौल घटाउने चक्करमा पनि अस्थायी रुपले युरिक एसिडको स्तर बढ्न सक्छ । साथै, युरिक एसिड बढाउनमा मधुमेहको औषधी पनि एउटा कारण बन्न सक्छ ।
कस्ता मानिसलाई हुन्छ युरिक एसिड ?
– धेरै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा सेवन गर्ने – अस्वस्थ्यकर खाना खाने – शारीरिक श्रम नगर्ने – वंशानुगत – मदिरा सेवन गर्ने – रगत पातलो बनाउने औषधी सेवन गर्ने – उच्च रक्तचापको औषधी सेवन गरिरहेका
कसरी गर्ने नियन्त्रण ?
– युरिक एसिडबाट बच्न पर्याप्त पानी वा झोलयुक्त खानेकुरा सेवन गर्ने । – जति बढि तरल खायो युरिक एसिड पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छ । – खानपानमा सतर्कता अपनाउने, धेरै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा सेवन नगर्ने । – रातो मासु, कलेजो, रक्सी, गेडागुडी जस्ता खानेकुरा नखाने ।
– हरेक दिन खानामा भिटामिन सि खाने । – नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ । – स्वथ्य खानपान र जीवनशैली अपनाउने । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा